Beesha Caalamka ayaa walaac ka muujiyay heshiiskii dhowaan ay gaareen DFS iyo DGXDF… – Hagaag.com
Beesha Caalamka ayaa walaac ka muujiyay heshiiskii dhowaan ay gaareen DFS iyo DGXDF…
Beesha Caalamka ayaa waxay Warsaxaafadeed ka soo saartay shirkii maalintii Arbacada Magaalada Muqdisho ugu soo geba-gaboobay Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, waxayna saluugtay qodobada qaar ee shirkaasi laga soo saaray.
Warsaxaafadeedka Beesha caalamka ayaa u qornaa:-
Saaxiibada caalamiga ee Somalia waxay garwaaqsan yihiin heshiiskii ay ku dhawaaqeen Madaxweynaha Dowladda Federaalka iyo shanta Madaxweyne Dowlad Goboleed ee xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, heshiiskaas oo la xiriiray geedi-socodka doorashooyinka 2020/21.
Waxay qirayaan in heshiiskan uu ka dhashay wadahadal ay Soomaali garwadeen ka tahay, isla-markaana ay Soomaali leedahay, kaas oo dhexmaray Madaxda DFS iyo DGXDF, waxayna saaxiibadu fahamsan yihiin in qaar ka mid ah faahfaahinta geedi-socodkii lagu heshiiyay aan weli la cadeynin, oo saamilley dheeraad ah lagala tashan karo.
Saaxiibadu waxay iyagoo ka xun arkayaan in hannaanka la shaaciyay uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayay, ee ahaa cod-bixin toos ah oo lagu soo doorto Xildhibaanada Baarlamaanka, wareeggaan doorasho. Saaxiibadu waxay ku baaqayaan in geedi-socodka doorasho ee 2020/21 noqoto mid xor/xalaal ah, daah-furan, loona dhanyahay.
Iyadoo la eegayo mustaqbalka, saaxiibada caalamka waxay dhiiragelinayaan in horumar dhakhso ah laga gaaro dhismaha hay’adaha kale ee dimoqraadiyadda Soomaaliyeed, oo ay ku jiraan Guddiga Adeegga Garsoorka iyo Guddiga Xuquuqul Insaanka, iyadoo ay barbar socdaan dadaalada lagu horumarinayo dib-u-eegista Dastuurka Federaalka Ku-meel-gaarka ah iyo in la xaqiijiyo dhawridda ballanqaadyada caalamiga ah ee khuseeya Xuquuqul Insaanka.
Saaxiibadu waxay sidoo kale soo dhaweynayaan khariidad/tub ay la socdaan bartilmaameedyo qeexan, oo ay ku heshiiyaan Madaxda Siyaasadda Somalia, si loo xaqiijiyo horumar dimoqoraadiyadeed dhab ah/la taaban karo oo horey loogu sii socdo.
Saaxiibada caalamiga ee Somalia waxay ugu baaqayaan Madaxda DFS iyo DGXDF inay sii wadaan kulamada joogtada ah, iyagoo yeelanaya wadahadal iyo isu-tanaasul, si wax looga qabto arrimaha deg-dega ah ee hortabinta qaran leh, oo ay ka mid yihiin dib-u-habaynta amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda loo dhanyahay.